Novemba - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Novemba bụ ọnwa nke iri na otu na penultimate na afo na Julian na Gregorian Calendars, nke anọ na nke ikpeazụ n'ime ọnwa anọ nwere ogologo ụbọchị iri atọ na nke ise na nke ikpeazụ nke ọnwa ise ka ọ nwee ogologo ihe na-erughị ụbọchị 31.
Novemba bụ ọnwa nke itoolu na kalenda Romulus c. 750 BC. Nọvemba jigidere aha ya (site na Latin novem nke pụtara "iteghete") mgbe agbakwunyere Jenụwarị na Febụwarị na kalenda Rome mpo777. Nọvemba bụ ọnwa mbubreyo n'oge opupu ihe ubi na mpaghara ndịda na ngwụcha mgbụsị akwụkwọ na Northern Hemisphere.
Ya mere, Nọvemba na South Hemisphere bụ oge nke ọnwa Mee na Northern Hemisphere na vice versa. Na Rome oge ochie, e mere Ludi Plebeii site na Nọvemba 4–17, Epulum Jovis mere na Nọvemba 13 na ememe Brumalia malitere na Nọvemba 24. Ụbọchị ndị a adabaghị na kalenda Gregorian nke oge a.
Ndị Anglo-Saxon kpọrọ Nọvemba dị ka Blōtmọnaþ. Brumaire na Frimaire bụ ọnwa ndị November dabara na kalenda French Republican.
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Novemba&oldid=74965
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 9 Ọnwa anọ 2022, mgbe 10:32